मार्क्स-लेनिनले नै मार्क्सवाद नबुझेर मार्क्सवाद संकटमा पर्‍यो कि, पूँजीवादले अभयदान पायो? - हिमाल दैनिक
मार्क्स-लेनिनले नै मार्क्सवाद नबुझेर मार्क्सवाद संकटमा पर्‍यो कि, पूँजीवादले अभयदान पायो?
लेनिनहरुले पूँजीवाद उच्चचरण अथवा मरणासन्न अवस्थामा आयो भनेका थिए। तर, आज त्यो पूँजीवाद मैमत्त भएर आएको छ भने कहाँ मर्यो त? यस प्रश्नको उत्तर अनिवार्य रुपमा दिनै पर्छ, खोज्नै पर्छ
१५ भाद्र २०७६, आईतवार १४:११
आहुती (विश्वभक्त दुलाल)
विन्दा पाण्डेजीले लिखित र लामै रुपमा धेरै जसो लेखको समिक्षात्मक टिप्पणी गरिसकेपछि मैले पनि सबै लेखहरुबारे टिप्पणी गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन।
एक त अधिकांश लेख पहिले नै छापिइसकेका लेखहरु हुन्। त्यतिबेला नै कतिपय लेखसँग असाध्यै खुशी लागेको र कतिपय विषयमा असाध्यै रिस उठिसकको थियो।
यो पुस्तकका रुपमा आइसकेपछि त्यसमा कुनै फेरबदल भएको छ कि भनि हेरेँ। आधारभूत रुपमा त्यसमा फेरबदल भएको पाइन। त्यसैले अधिकांश विषय पढिसकेकै कुरा हुन्।
लेखकको पनि आफ्नो मुख्य विषय हुन्छ। पाठकको पनि आफ्नो विषय हुन्छ। त्यसरी हेर्दा मैले सबै विषयमा बोल्न थालेँ भने मैले बोल्न खोजेको विषयमा समयले बोल्नै भ्याइदैन। त्यसकारण मेरो सरोकारको विषयमा मात्र आफ्ना विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यो पुस्तकमा भएका विषयहरुमध्ये मेरो सरोकार के मा बढि रह्यो भने आगामी दिनको नेपाली समाजको यात्रा र विश्व समाजको यात्रा कता जानुपर्छ भनि लेखकले जे व्यक्त गर्नु भएको छ त्यो कुरामा नै म केन्द्रित हुन चाहन्छु।
यस सन्दर्भमा उहाँ (चैतन्य मिश्र)ले के भन्नु भएको छ भने, मार्क्सवाद मूलतः इतिहासलाई हेर्ने ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण छ। मार्क्सले त्यसलाई ऐतिहासिक भौतिकवादको नाम दिनु भएको त थिएन पछि रुसमा पुगिसकेपछि कार्ल काउत्स्की कालमा त्यसलाई ऐतिहासिक भौतिकवाद भनेर पनि नाम दिइयो। कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कहिलेकाहीँ ऐतिहासिक भौतिकवाद भनेको मार्क्सवादको छुट्टै सिद्धान्त हो जस्तोगरी पढियो। तर, कुरा त्यस्तो केही पनि होइन।
इतिहासका सन्दर्भमा द्धन्द्धात्मक भौतिकवाद भनेको मात्रै थियो। सिद्धान्तका आधारमा यो सिद्धान्तले के भन्छ भने, एउटा समाजभित्र नै नयाँ समाज जन्मिन्छ, अर्थात त्यसको भ्रुण जन्मिन्छ, विकसित हुन्छ र त्यसले पुरानो खराब समाजलाई नयाँ प्रगतिशील भ्रुणले विस्तापित गर्छ। सामान्य सिद्धान्त यहि नै हो।
यो ऐतिहासिक भौतिकवादका आधारमा लेखकले पुस्तकमा के भन्नु भएको छ भने, कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्ने बेला सय वर्ष अगाडि नै भएको थिएन र अहिले पनि गठन गर्ने बेला भएको छैन। त्यसकारण कम्युनिष्ट पार्टी अब चाहिँदैन। अर्थात सय वर्ष अगाडि पनि चाहिँदैनथ्यो र अहिले चाहिने त कुरै भएन।
दोस्रो, किन त्यस्तो त भन्दा, जुन बेला लेनिनले पूँजीवाद ओरालो लाग्यो र उच्चतम विन्दुमा पुग्यो भनेर भने त्यतिबेला पूँजीवाद ओरालो लागेकै थिएन। किन कि आजसम्म पनि पूँजीवादले यति राइँदाई गरिरहेको छ भने त्यतिबेला कहाँबाट ओरालो लाग्यो? ओरालो लागेकै थिएन भने, मार्क्सले त ओरालो नलागेको चिजलाई खेद्नै हुन्न भनेका थिए। अनि खेद्नै नहुने चिजलाई खेद्न थालेपछि त्यो क्रान्ति नउल्टिए के हुन्छ त? त्यसकारण लेनिनहरु असफल हुनुको कारण पूँजीवादका विरुद्ध लड्ने चरण भएकै थिएन भन्ने उहाँको निश्कर्ष छ।
त्यसको सट्टा त्यतिबेला के गर्नु पर्दथ्यो त भन्दा लेनिनहरुले पनि पूँजीवादलाई विकास गर्न थाल्नु पर्दथ्यो। किन भने पूँजीवादले राम्रो वैंश देखाउनै पाएको थिएन। त्यसलाई वैंशालु बनाउनका लागि लेनिनहरुले पूँजीवादलाई विकास गर्दै जानु पर्दथ्यो। लेनिनहरुले त्यसो गरेनन्, माओले त झन गरेनन् त्यसकारणले उहाँहरु असफल पनि हुनु भयो र सय वर्षमा साह्रै ठूलो दुःख पाइयो भन्ने निश्कर्ष यहाँ निस्कन्छ।
अन्त्यमा यसको निश्कर्ष के हो भने, लेनिनले मार्क्सवाद बुझेनन् भन्ने वाक्यलाई यसमा लेख्नु भएको छ।
यदि उहाँ (लेखक)ले भनेको कुरा मान्ने हो भने, छोटोमा आफ्ना केही कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो, उहाँले मार्क्सको समयसम्म ठिक छ तर, लेनिनको समयदेखि बिग्रीयो भन्ने भनाइ छ। यदि यो कुरा सत्य हो भने मार्क्सले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र केका निमित्त लेखेका थिए? किन कि मार्क्सले उनको ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्लेषण अनुसार, पूँजीवादको विकास गर्न लाग्नु पर्दछ भन्ने निश्कर्ष थियो भने कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र पूँजीवादलाई विकास गर्न लेखिएको थियो त? या मार्क्सले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र लेख्नु नै गलत थियो कि? या उहाँ (लेखक)ले भनेको जस्तो त्यतिबेलाको पूँजीवाद अलिकति क्रूर खालको भयो र त्यसलाई अलिकति नरम सामाजिक पूँजीवादी बनाउँन भनि लेखेको हुनु पर्यो। त्यसो हो त भन्ने एउटा बसह यहाँ जन्मिन्छ।
अब मार्क्स कुनै प्राध्यापक वा पत्रकारमा मात्रै अल्झिनु भएन। उहाँ त संगठनकर्ता भएर निस्किनु भयो उहाँले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मजदूर संगठन बनाउनु भयो। यदि त्यहि हो भने त्यो श्रम संगठन किन बनाउनु भयो त? त्यतिबेलाको पूँजीवादलाई विकास गराउन बनाउनु भएको हो त? यदि मार्क्सको ऐतिहासिक भौतिकवादले त्यतिबेलाको पूँजीवादलाई अहिलेसम्म पनि विकास गर्नु पर्छ भनेको हो भने मार्क्सले बनाएको श्रमिक संघले त पूँजीवादलाई विकास गर्न बनाएको हुनु पर्यो। यो धेरै जटिल प्रश्न हो।
यदि मार्क्सले त्यसो गरेको हो भने, कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र पनि पूँजीवादलाई सघाउनका लागि लेखेको र पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संघ पनि पूँजीवादलाई सघाउनका निम्ति बनाएको हो भने उहाँहरुको राष्ट्रियता नै खोस्नेगरी पूँजीवादले किन देश निकाला गर्यो?
लेनिनले पनि मार्क्सलाई नबुझ्ने, आफूलाई सहयोग गर्ने पूँजीवादले पनि नबुझ्ने हो भने भएको के हो? मेरो विचारमा यो धेरै नै गाह्रो प्रश्न छ जसको उत्तर सजिलै निस्कँदैन।
त्यसकारण मार्क्सले माक्सवाद बुझेनन् भन्ने ठाउँमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। किन कि ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सले संस्लेषण गरेको, ऐतिहासिक भौतिकवादले पूँजीवादलाई विकास गर्नु पर्छ भनेको मार्क्स स्वयं नै पूँजीवादलाई ध्वंस गर्नु पर्छ भनि हिँडेपछि मार्क्सले मार्क्सवादलाई बुझेको कसरी ठहर्छ?
यहाँ तर्कहरुको लामो सञ्जाल छ। त्यसकारण ऐतिहासिक भौतिकवादलाई बुझ्ने कसरी भन्ने बहस जरुरी छ।
लेखकको छलफलमा एउटा कुरा गम्भीरतापूर्वक छुटेको छ। त्यो हो मानिस कस्तो प्राणी हो? मानिस सचेत प्रयत्न गर्ने प्राणी हो भन्ने छुट्दछ। सचेत प्रयत्न गर्ने प्राणी भएको हुनाले मानिस पशु जगतबाट अलग भएको हो भन्ने छुटेको छ।
मानिस सचेत प्रयत्न गर्ने भएको हुनाले नै माक्र्सले भन्नु भयोः वस्तुहरुको व्याख्या मुख्य कुरा होइन बदल्नु मुख्य कुरा हो। बदल्नु नै मुख्य कुरा हो भन्ने चेतना ऐतिहासिक भौतिकवादभित्रको आंगिकता हो अलग कुरा होइन। ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धान्तभित्र मान्छे छ। किन कि उत्पादक शक्तिवीना ऐतिहासिक भौतिकवादको व्याख्या गर्नै सकिँदैन। उत्पादक शक्तिभित्रको एउटा निर्णायक चिज हो मानिस। प्रमुख चिजहरुमा औजार, प्रकृति इत्यादी हुन् तर, निर्णायक मानिस नै हो।
त्यो निर्णायक मानिस कस्तो छ भने, गर्वको नियम थाहा पाउनेवित्तिकै उसले सातै महिनामा पनि बच्चा निकाल्दछ। हो भ्रुणलाई तीन महिनामा निकाल्न सकिँदैन, त्यो गर्दा दुर्घटना हुन्छ। तर, नौ महिना नै राख्नु पर्छ भन्ने छैन। किन कि प्रजनन् विज्ञानबारे जब मानिसले थाहा पाउँछ त्यसपछि उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार केही हप्ता अगाडि नै निकालिदिन्छ। त्यो बच्चा अस्वस्थ हुन्न। आजसम्मको हाइब्रिड दुनियामा मानिसको सचेत प्रयत्न त्यहाँ थपिएको छ।
यहाँ आम नियम मात्रै छैन। त्यहाँ सचेत प्रयत्न पनि थपिएको छ। तब न मानिसले फड्को हान्छ। यो पक्षलाई ऐतिहासिक भौतिकवादबाट अलग गरियो भने हामी के बुझ्छौ त भने, सामान्य प्राकृतिक प्रक्रियामात्रै हो संसारको नियम। समाज बदल्ने कुरा पनि सामान्य प्रक्रियामात्रै हो भन्ने कुरा तर, सत्य होइन।
कुनै पनि समाज बद्लिनका निम्ति जतिसुकै आधारभूत कुराहरु पुगेको होस् तर, त्यहाँ सचेत प्रयत्न जरुरी हुन्छ।
जस्तो कि, आन्दोलनताका करण सिंह भारतबाट नेपाल आए र सझौता गर्न भने। त्यतिबेला अरुको कुरा छोडिदिउँ, गिरिजाप्रसाद कोइराला करण सिंहले भनेको कुरामा सहमत भएको भए यो राजतन्त्र जाँदैनथ्यो। त्यो राजतन्त्र नगएको भए हामी के भन्थ्यौँ, राजतन्त्र फाल्ने बेलै भएको थिएन। यो मिल्दैन र होइन पनि। युरोपका राजतन्त्रहरु अहिले जति छन् के तिनलाई फाल्ने बेला नभएका कारण रहेका हुन्? के पूँजीवादी क्रान्ति गर्ने बेला नभएको कारण बेलायतको राजतन्त्र बाँकी रहेको हो? यस्तो निश्कर्ष निकालौँला, होइन। त्यहाँ सयौँ सचेतन प्रयत्नका संयोगहरुले काम गर्दछन्। त्यसकारण ऐतिहासिक भौतिकवादलाईं बुझ्दा, मैरो बुझाइ यो छः दास युगबाट जब भूदास र मोही, किसानको युगमा मानिसहरु जान्छन्, त्यो मोही किसान वा भूदासले के ठान्दछ भने, दास हुँदा मलाई किनिन्थ्यो, मारिन्थ्यो, काटिन्थ्यो, थुनिन्थ्यो पनि र मेरो उब्जनीमा मेरो कुनै भाग हुँदैनथ्यो। अहिले त मैले जति कूत बुझाउनु परेपनि एक भाग त मसँगै रहन्छ, मेरो छुट्टै घर, परिवार हुन्छ भनेर उसले खुशी मान्दछ। तर, जब मोही किसानको प्रगति अबरुद्ध हुन सुरु हुन्छ त्यसपछि त्यो मोही किसान स्वभाविक रुपमा आफ्नो मुक्तिको विचारका निम्ति छट्पटाउन थाल्दछ। त्यो छट्पटाउने भनेको कसरी मुक्त हुने, कसरी औषधी बनाउने, कहाँ लड्ने कहाँ नलड्ने भन्ने विचार सुरु हुन्छ। यसको मापन कुनै डिग्रीमा हुँदैन। त्यतिबेलाको वस्तुस्थिति, समग्र परिवेश कसरी निर्माण हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ।
मजदूर वर्गको कुरा पनि त्यहि हो। सामन्तवादबाट पूँजीवादमा आयो मजदूर वर्गले गाउँघरमा दुःख पाएको माही, किसान भएर बसेको मान्छे स्वतन्त्र भएर शहर र औद्योगिक केन्द्रमा आयो। उसलाई त्यहाँ लाग्यो कि म मुक्त भएँ। त्यो मुक्तिको चरणसम्ममा उसले पूँजीवादलाई सहयोग गर्यो। तर, जब मजदूरहरुको फौजको जिन्दगी त्यो पूँजीवादले अगाडि बढाउन नसक्ने भयो त्यसपछि मजदूर वर्गले आफ्नो हिसाब खोज्न थाल्यो। त्यसक्रममा उसले पहिले मेशिन भत्काउँदै हिँड्न थाल्यो। विस्तारै उसले जब बुझ्यो कि मेशिनले होइन सामाजिक व्यवस्थाको खराबीले समस्या आएको हो। त्यसपछि उसले त्यसको विरुद्ध लड्न थाल्यो।
त्यसकारण ऐतिहासिक भौतिकवादले के भन्यो भन्दा पुरानो सामाजिक व्यवस्था मर्न सुरु भएपछिमात्रै मार्नु पर्छ भन्दैन। यदि त्यो हो भने मर्न लागेकोलाई किन मार्नु पर्यो? आफैँ मरिहाल्छ नि। यसमा सचेतन प्रयत्न कहाँबाट आयो त? मर्न लागेको मान्छेलाई मार्नु पर्दैन। उ अन्त्यतः मर्छ। तर, त्यसो होइन। खराब चिजको विरुद्ध श्रृखलाबद्ध सचेतन अभियानहरु जरुरी हुन्छ।
स्टालिनको विद्रोहलाई के भन्ने? के दास युग ढल्ने बेलाको थियो कि वैशमा थियो? चीनको रातो आँखी भौँ वाला दास विद्रोहलाई के भन्ने? के लखन थापाले गरेको विद्रोह वाइहात कुरा थियो त? के पश्चिमका बलदेव शाहीहरुले केन्द्रियकरणको विरुद्ध गरेको संघर्ष वाइहात कुरा थियो? किन कि त्यतिबेला संघीयतामा जाने कुरा थिएन। यसरी इतिहासको निर्माण हुँदैन। यसरी नयाँ समाज जन्म हुँदैन। नयाँ समाजको जन्म असन्तुष्टिहरुबाट सुरु हुन्छ। उसको जीवनलाई समस्या परेपछि सुरु हुन्छ।
वस्तुगत परिस्थितिबारे माक्र्सवादमा एउटा शब्दाबली नै छः प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्दै जानु पर्छ भन्ने। यो नियम विपरितको कुरा होइन। प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्न सकिन्छ। यसका निम्ति अनेक अन्तरविरोधहरुसँग खेल्नु पर्ने हुन्छ, मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो अर्कै विषय हो।
यदि यो सचेतन प्रयत्नलाई कटाइदिने हो भने यस्तै निश्कर्ष निस्कन्छ। यसबारे गम्भीर छलफलको आवश्यकता छ।
लेखकले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यो हो, लेनिनहरुले पूँजीवाद उच्चचरण अथवा मरणासन्न अवस्थामा आयो भनेका थिए। तर, आज त्यो पूँजीवाद मैमत्त भएर आएको छ भने कहाँ मर्यो त? यस प्रश्नको उत्तर अनिवार्य रुपमा दिनै पर्छ, खोज्नै पर्छ।
मेरो विचारमा लेनिनले भनेको पूँजीवाद अब उच्च चरणमा पुगेपछि ओरालो लाग्दछ भनेको पूँजीवाद ओरालै लागेको हो। कसरी भने, त्यतिबेलाको पूँजीवाद अथवा पूँजीवादी साम्राज्यवादको मुख्य अंगको रुपमा उपनिवेशवाद थियो। जुन उपनिवेशवाद दोस्रो विश्वयुद्धको हाराहारीमा पुग्दा सम्पूर्ण रुपले पराजित भयो भने को हारेको थियो? उपनिवेशवादको हार भनेको त्यतिबेलाको एकाधिकारवादी पूँजीवाद त हारेको थियो नि। बेलायत भारतबाट फर्किनु भनेको उसको पूँजीवाद त हारेको हो। उपनिवेशवादी बेलायती पूँजीवाद भारतबाट भागेर त्यहाँ जितेको हो त? हारेकै हो। कुरा यत्तिमात्रै हो कि पूँजीवाद हार्न सुरु गर्यो तर, जहाँ जहाँ कम्युनिष्टहरुले आफ्नो पहल लिए त्यहाँ कम्युनिष्ट शासनतिर गए जहाँ जहाँ पूँजीवादले पहल लियो त्यहाँ महात्म गान्धीहरु अगाडि आए। भएको यत्ति हो।
त्यसैले उपनिवेशवाद र पूँजीवाद हारेकै हो। सय वर्षको इतिहासलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्यो भने, १०१७ देखि सुरु भएको क्युवाको क्रान्ति १९५९ सम्ममा संसारभरी क्रान्ति नै क्रान्तिको तरंग छ। कम्युनिष्ट क्रान्तिको मात्रै कुरा होइन। त्यतिबेलाको पूँजीवाद हार्दै हार्दै गएको छ र आ¬.आफ्नै देशमा संकुचन हुँदै गएको छ।
त्यसपछि १९५९ देखि आजसम्म हेर्यो भने प्रतिक्रान्ति हावी भएको छ र क्रान्तिहरु अपवाद बाहेक हार्दै गएको छ। त्यसकारण पूँजीवाद त्यतिबेला हारेको हुनाले दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरलाई हराउनका निम्ति सोभियत संघसँग मिल्न गएको हो नि। नहारेको भए किन जान्थ्यो त? शितयुद्ध किन गरेको? पूँजीवादले हान्न नसकेरै भएको हो।
अहिलेको पनि नायक पूँजीवाद अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने १९५९ मा क्युवामा क्रान्ति हुँदा त्यहाँ कस्ता मान्छेले क्रान्ति गरे भन्ने कुरासम्म पनि अमेरिकालाई थाहा थिएन। त्यो हालतमा पुगेको थियो अमेरिका। त्यसैले शितयुद्धमा पुग्नु, उपनिवेशवाद ध्वंश हुनु र विश्वव्यापी रुपमा कम्युनिष्टहरुको लहर आउनु भनेको त्यतिबेलाको एकाधिकारवादी पूँजीवादको हार नै थियो। आरालो लागेकै थियो। हो अब यसको उत्तर चाहियो। अहिले फेरि कसरी आयो यसको उत्तर खोज्नु छ।
मेरो विचारमा, लेखकले यो पुस्तकमा जे कुरा गर्नु भएको छ त्यो विल्कुल सहि कुरा छ। कि पूँजीवादभित्र तीन प्रकारका संकटहरु आउँछन्। एउटा लघु संकट जुन आठ, दश, पन्ध्र, बिस वर्षभित्र आउँछ। अर्को ३०/४० वर्षभित्र आउँछ। सबैभन्दा गहिरो संकट ६० देखि ८० वर्षको बीचमा आउँछ। यो मार्क्सवादले भने अनुसार नै छ।
यहाँ लेखकलाई नै प्रश्न गर्दा १९४० मा आएको त्यो गहिरो संकट आज मापन गर्यो भने हामी कति वर्ष भयौँ? मोटामोटी ८० वर्ष। ८० वर्षपछि पनि माक्र्सवादले भनेको त्यो संकट किन आएन? जब यो संकट किन आएन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिन्छ त्यसपछि के उत्तर भेटिन्छ भने, लेनिनहरुले भनेका कुरा आज किन लागू भएन। १९५९ सम्ममात्रै किन लागू भयो?
मेरो अध्ययनमा, दोस्रो विश्वयुद्ध सँगसँगै पूँजीवादले एउटा गतिलो हतियार फेला पार्यो। त्यो हो अपार रुपमा विकसित हुँदै आएको विज्ञान र प्रविधि। त्यहि विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर मर्न लागेको जीवनलाई पूँजीवादले जीवन दान पायो र फेरि मोटाएर आयो। विज्ञान र प्रविधिकै कारणले विश्वव्यापी पूँजीलाई फेरि एकीकृत गर्न थाल्यो। कर्पोरेट पूँजीवादको स्थिति आयो, डिजिटल्ली लगानी र नाफा ल्याउन थाल्यो। संसारका मजदूर एक हौँ भन्ने पुस्तक पनि किन्न नसक्ने हालतमा पुगे तर, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले औद्योगिक क्षेत्रदेखि सैनिक क्षेत्रलाई पनि असाधारण रुपले प्रयोग गर्यो। र व्यापारीदेखि उत्पादनसम्मलाई केन्द्रीकरण गर्यो। त्यसले नै पूँजीवादको नयाँ चरण सुरु भयो।
त्यसकारण आजको पूँजीवाद लेनिनकालिन पूँजीवाद होइन। आजको पूँजीवाद एकीकृत खालको बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला विश्वव्यापी रुपमा एउटै कोकाकोला कम्पनीवाला अमेरिका र रुसका पूँजीपति पनि एकसाथ हुने पूँजीवाद हो।
हिँजो उनीहरु एकले अर्कालाई हानेर विश्वयुद्धसम्म किन जान्थे भन्दा एकले अर्कालाई निषेध गरेर मात्रै नाफा कमाउन सम्भव हुन्थ्यो तर, आज एकले अर्कोसँग मिलेर हिँजोको भन्दा दोब्बर, तेब्बर सयौँगुणा नाफा गरिरहेका छन् भने उनीहरु एकले अर्कालाई हिर्काउनु पर्ने भएन। र यो गहिरो संकट पनि सजिलै टार्न सक्ने स्थितिमा उनीहरु पुगे। जुन विज्ञान प्रविधिको देन हो।
यहि कुरा कम्युनिष्ट अथवा समाजवादी व्यवस्थावालाहरुले विज्ञान, प्रविधिलाई सैन्य क्षेत्र लगायतका केही क्षेत्रमा त प्रयोग गरे तर, सिंगो समाजवाद निर्माण र सिंगो पूँजीवादविरुद्धको लडाइमा प्रयोग गर्न सकेनन्। जसको कारण उनीहरुको हार भयो।
यसमा उत्तर खोज्दा ९ वर्षसम्म स्वस्थ बाँचेको बालक भ्यागुते रोगले मर्यो भन्दैमा उ उमेर नपुगी जन्मिएको थियो भन्नु हुँदैन। उसको मृत्युको कारण पछाडि हुन सक्दछ। त्यसको कारण खोज्न थाल्नु पर्दछ।
यहाँ अरु केही विषयहरु छन्। एउटा विषय छ, कम्युनिष्टहरुले व्यक्तिगत सम्पत्ति उन्मूलन गर्ने नाममा सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरे। मेरो अध्ययनमा उनीहरुको बुझाइ नै गलत थियो। गलत मार्क्सको पनि हुन सक्छ, लेनिनको पनि हुन सक्छ हाम्रो पनि हुन सक्दछ। किन भने, निजी सम्पत्तिको विपरित राष्ट्रिय सम्पत्ति अथवा राज्यको सम्पत्ति हुँदैन। राज्य भनेको त निजी सम्पत्तिहरु जोडिएर बन्ने सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिको शक्ति हो। निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नु भनेको सानो पूँजीपतिबाट ठूलो निजी सम्पत्तिवालाकहाँ पुर्याउनु हो। यहाँ गल्ति भयो। त्यतिबेलाका सबै समाजवादीहरुले के गरे भने, सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यको मातहतमा ल्याए। जब कि राज्य भनेको निजी सम्पत्तिको विपरित थिएन।
निजी सम्पत्तिको विपरित के हो? त्यसको विपरित हो सामाजिक सम्पत्ति, समुदायको सम्पत्ति। यहाँ गडबढी भयो। निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुको सट्टा सामुदायिकरण वा सामाजिकीकरण गर्नु पर्ने थियो। त्यो नै माओले भनेको शब्द विभेदीकरण थियो।
अर्कोतिर, पूँजीवादले निर्माण गरेको संगठनको संरचना जुन पिरामिडको छ कम्युनिष्टहरुले पनि चाहेर वा नचाहेर त्यहि ढंगको बनाउन पुगे। सबैभन्दा बढि श्रमजिवीहरुले सबैभन्दा पहिले निर्णय गर्न नपाउने, ठूलो संख्याले निर्णय गर्न नपाउने भए। सबैभन्दा थोरै मानिस बसेको ठाउँका व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै निर्णय गर्न पाउने संरचना जुन पूँजीवादले नै निर्माण गरेको थियो त्यहि प्रणाली कम्युनिष्टहरुले पनि लागू गरे जसको कारण स्वभाविक रुपमा बहुसंख्यक जनता त्यसबाट रुष्ट हुन थाले।
त्यसकारण मेरो विचारमा, हामीले विषयमा कमजोरी छ तर, कहाँ छ भनि खोज्नु पर्यो। अहिले पनि भन्न सक्छु कि जुन बेला समाजवाद भनियो त्यहाँभित्र हजारौँ कमजोरीका बाबजूद त्यतिबेलाको पूँजीवादले उत्पादन गरेको उत्पादक शक्ति भन्दा उनीहरुले कमजोर स्थिति बनाएका थिए। पछि विग्रीन थाल्यो र भोकमरी पनि आउन थाल्यो त्यो अर्कै विषय हो।
यहिँ हिसाब गरौँ, १९३९ र ०४७ यी दुई समयमा भारत र चीन मुक्त भए। तर, १९७६ मा गएर भारत र चीनको अर्थतन्त्रलाई हेर्यो भने के चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा पछाडि थियो? थिएन। पीछडिएको भनिएको सामन्तवादलाई पूरै अन्त्य नभएको रुसलाई पूँजीवादको वैकल्पिक ध्रुवको रुपमा च्यालेन्ज गर्ने रुसको उत्पादन पूँजीवादको भन्दा कमजोर थियो? अहिले पनि संसारबाट एक्लीएर समस्यै समस्याकोबीचमा बाँचेको क्युवा मानविताको कोणबाट हेर्दा अहिले पनि सर्वोत्कृष्ट भनिएको पूँजीवाद भन्दा मानवताको दृष्टिकोणले धेरै अगाडि छ।
त्यसकारण हामीले विषयलाई यसको जरो नै मार्नेगरी गर्नु हुन्न र यो प्रणालीगत रुपमा पनि ठिक होइन। यसर्थ अब यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ। लेखकले सबैभन्दा राम्रो अध्ययन गरी सुन्दर तर्क अगाडि ल्याउनु भएको छ यसमा गहिरो गरी अध्ययन गरी विश्लेषण गरौँ। ५० नाघेकालाई होइन, त्यो भन्दा कमका उमेरमा छलफल केन्द्रित गरौँ।
(चैतन्य मिश्रद्धारा गैर-आख्यान ‘लोकतन्त्र र मार्क्सवाद’को लोकार्पण कार्यक्रममा शनिबार व्यक्त विचारमा आधारित)
Prevपछिल्लोलोकन्थलीमा पुनःपहिरो, सडक भासियो, छ घर उच्च जोखिममा
अघिल्लो१२ जनामा डेङ्गुNext